Iifroni → Iimpahla ezisebenzayo • I-P & M yobuchwephesha bokuhombisa iikhompyuter
Iirons Umsebenzi yimveliso eyenzelwe imisebenzi kwimizi-mveliso eyahlukeneyo. Isetyenziselwa ukukhusela iimpahla ekungcoleni okanye ekulimaleni. Ubungakanani bazo bukho jikelele, kodwa banokuhlengahlengiswa ngemitya.
Ukongeza kwiimveliso ezinokusetyenzwa kwakhona, sikwanazo neefaskoti ezilahlwayo ezipakishwe kwiziqwenga ezili-10 okanye ezili-100, ngakumbi ezisetyenziswa kwi-gastronomy. Kwivenkile uyakufumana iimodeli ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinje ngomqhaphu onzima, ipholiyesta, irabha, ipolypropylene kunye nezinye, kuxhomekeke kusetyenziso olucetywayo.
Izinto ezisetyenzisiweyo zikumgangatho ophezulu kwaye zineempawu ezongezelelekileyo kwimeko yeefaskoti zengcali. Inxalenye enkulu yayo yayenziwe ngezinto ezinokuhlambeka ngokulula. Sibonelela, phakathi kwabanye, izinto zokuthambisa, ukutya kunye neendawo zokuxhela.
Sikwabonelela ngeefaskoti kwicandelo lezimpahla zokusebenza neefaskoti yabantwana kubathandi abancinci bezilingo zokupheka.
Ukunikezelwa kweefaskoti zomsebenzi kubandakanya:
ye-gastronomy kunye ne-SPA,
Gastronomy kunye ne-SPA
Eyona nto idumileyo kunikezo ziifaskoti ukukhusela zinikezelwe kushishino lokutya kunye nezimonyo. Sikwanikezela ngento ebizwa ngokuba ziifaskroni - iifaskoti ezimfutshane. Iimpahla zenziwe ngomqhaphu kunye nokudityaniswa komqhaphu kunye nezinto zokwenziwa, ukuvumela ukuba kususwe ngokulula amabala kukutya okanye kwizithambiso, phakathi kwabanye. Imibala yamalaphu asetyenziselwa iifaskoti yongeza ukucoceka okucocekileyo.
Kula mashishini, i-aesthetics kunye nomfanekiso kubaluleke kakhulu kuba abasebenzi banonxibelelwano oluninzi kunye nabathengi-iimveliso zethu ziya kubenza bazive benobuchule kunye nobuhle. Ukhetho olongezelelweyo oyimfakamfele ilogo iya kukuvumela ukuba uphume kukhuphiswano kunye nokuncamathela okungcono kwimemori yomamkeli.
Izixhobo ezikhethekileyo zokulwa nokusika
Iifaskoti zentsimbi ezikumgangatho ophezulu anti-cut zenzelwe ikakhulu ishishini lokutya. Ziyinxalenye yezixhobo zomqeshwa owenza umsebenzi onxulumene nokuphatha imela ejolise emzimbeni. Iifrons zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu yentsimbi kunye nenkqubo yeringi yentsimbi enobubanzi obuyi-7 mm, ukuhlangabezana neemfuno ze-EN13998 (inqanaba 2). Umgangatho uvumela ukusetyenziswa kwiimeko zokhathalelo olulodwa. Ukuxhathisa okuphezulu kwale nto kwenza kube nzima ukugqobhoza umzimba.
Iifroni zikulungele ukusebenza kwinkqubo ye-HACCP. Zingasetyenziselwa ukuqhubekeka kweeplastiki kunye nesikhumba, kunye nokwahlula inyama emathanjeni. Umenzi uqinisekisile ukuba ifaskoti, ngaphandle kwayo, ibikhaphukhaphu ngokulula kwaye ayithinteli inkululeko yokuhamba.
Iifroni zenziwe I-polypropylene, i-PE, i-PVC kunye ne-tyvek Zenzelwe iimeko apho kukho izinto ezinokonakalisa impahla kunye nolusu ngenxa yokudibana nezinto ezinje ngeekhemikhali okanye izinto ezinokutsha. Sinikezela ngeefaskoti zelebhu ezenziwe nge-polypropylene enekhola yokukhusela intamo, kunye neemodeli ezenziwe nge-microporous PE laminate eyenzelwe ukukhusela xa usebenza ngezinto eziyingozi.
Phakathi kweefaskoti zokhuselo, kukwakho neefaskoti ze-PVC ezenziwe ngerabha, eyona ifanelekileyo ekusebenzeni kwivenkile yokuxhela, apho inyama ingadingi imela ejolise emzimbeni. Ukuxinana okukhusela iimpahla kuqinisekiswa yinto ekhutshiweyo.
Sinikezela iifaskoti iyasebenza iinkampani ezaziwayo iLeber & Hollman kunye neReis. Iimodeli esinazo kwintengiso ziyafumaneka ngemikhono emide nemifutshane. Iifroni ezibandakanya umxube welaphu le-polyester kunye nomqhaphu onzima ziyacetyiswa ukuba zisebenze ekhitshini, apho iimpahla zivezwa kukungcola okunzima kwaye okuhlala kwenzeka, nto leyo efuna ukuhlanjwa rhoqo kumaqondo obushushu aphezulu, nditsho ukuya kuthi ga kwi-95 degrees Celsius, ngelixa kugcinwa ubuhle beempahla.
Ukongeza ekhitshini, iifaskoti zilungele ukusebenza kwindawo yokugcina izinto, kwimveliso, kwindibano okanye kwiilebhu. Uyilo lwanamhlanje luvumela ukubonakala okuhle, kwaye iinkcukacha ezichanekileyo ziya kungqineka ziluncedo ekusetyenzisweni ixesha elide.
Iarolero iifaskoti ezisebenzayoiifaskoti zomsebenzi omhlopheiifaskoti zomsebenzi wabasetyhiniiifaskoti zomsebenziIifaskoti zomsebenzi iAllegroiifaskoti zomsebenzi womqhaphuiifaskoti zomsebenzi wabasetyhinisebenza iifaskoti zabafazi iAllegroUmsebenzi weefaskoti zokucocaUmsebenzi ifaskoti maciejiifaskoti zomsebenzi wamadodasebenza iifaskoti zamadoda ezintoukusebenza kweefaskotiiifaskoti zomsebenzi ezinesitayileiiapron ezisebenza wrocławUmsebenzi iimpahla iifaskoti zabasetyhini